Ampidino Hunting Clash APK ho an'ny Android
Ampidino Hunting Clash
Ampidino Hunting Clash,
Ianao ve mila basy sniper na tsipìka? Anjaranao ny safidy. Ny mihaza miaraka aminny basy dia malaza kokoa noho ny mihaza aminny tsipìka, fa ny mihaza aminny tsipika dia mbola tena tianny mpihaza taloha, indrindra rehefa mihaza serfa.
Na aleonao mihaza aminny basy na zana-tsipìka dia manana mpanentana maro hisafidianana. Hanatsara ny fitaovanao mitifitra ary hitifitra biby miaraka amina famonoana mahafaty.
Hitanao ve ny volonilay bera? Nampitsangatsangana ny hafatrao ve ianao? Ahoana ny aminny serfa tena zava-misy? Ny fihazana biby toy izany dia tena fahafinaretana. Manampia ireo ahitra, hazo ary toetrandro tena izy. Tena zava-misy tokoa fa saika azonao fofonaina ilay biby tianao hazaina.
Araho ny diera, bunker, bera volontany, amboadia, gana ary maro hafa any anala. Misafidiana biby, mikendry ary mitifitra! Miomàna aminny traikefa sniper tena any anala.